कहाँ छिन् पुर्व मिस इन्टरनेशनल नीति शाह (हेरौँ २४ तस्बिर) - Sindhuli Saugat
कहाँ छिन् पुर्व मिस इन्टरनेशनल नीति शाह (हेरौँ २४ तस्बिर)
सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७६ वैशाख ३१ गते मंगलवार काठमाडौं
नीति शाह ‘मिस नेपाल इन्टरनेशनल २०१७’को उपाधि विजेता हुनुअघिनै नेपाली संचारमाध्यममा छाहिरहन्थिन् । मिस नेपालमा आएपछि उनको चर्चा झनै चुलियो । तर, मिस नेपाल हुन नसकेकि शाह अहिले भने संचारमाध्यममा खासै देखिन्न । उनको चर्चा सेलाएको छ ।
बाँकी २३ तस्बिरहरु समाचारको अन्तिममा छ
मोडलिङबाट सौन्दर्य प्रतियोगीतामा छिरेकी शाह र्याम्प मोडलिङमा चिनिएकी मोडल पनि हुन् । मिस नेपाल बन्ने चाहना पालेकी २२ वर्षीया नीति सेन्ट जेभियर्समा पत्रकारिता बिषयमा अध्यायरत छिन् । ११ कक्षा अध्ययनरत छँदै मोडलिङ सुरु गरेकी उनले १६ वर्षकै उमेरमा फोटोसुट गराएकी थिइन् । विभिन्न पत्रपत्रिकाको कभर गर्ल बनिसकेकी नीतिलाई नेपालकै सुन्दर महिलाहरुको सूचीमा पनि राख्ने गरिन्छ । नीतिका बुवा अवकाश प्राप्त सैनिक हुन् भने आमा शिक्षिका । सामाजिक सञ्जालमा पनि उनी निकै चर्चित रहेकी छिन् । उनका हजारौँ फलोअर्स रहेका छन् ।
हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेझैं अहिलेकी व्यस्त र्याम्प मोडल शाह सानैदेखि मोडलिङ तथा मिडियातर्फ आकर्षित थिइन् । त्यतिबेलादेखि मिस नेपाल, मिस वल्र्ड आदि चासो दिएर हेर्ने नीतिले शीताष्मा चन्दले मिस नेपालको ताज जितेपछि आफूमा पनि मिस नेपाल बन्ने चाहना बढेको बताइन् ।
११ कक्षा अध्ययनरत छँदै मोडलिङ सुरु गरेकी नीतिले १६ वर्षकै उमेरमा फोटोसुट गराइन् । विभिन्न पत्रपत्रिकाको कभर गर्ल बनिसकेकी नीतिलाई नेपालकै सुन्दर महिलाहरूको सूचीमा राख्न थालिएको छ । २०१३ मा हाउस अफ फेसनमा रनरअप भएपछि उनी ¥याम्पमा देखिन थालेकी हुन् । फेस अफ आरबी डाइमण्ड नीतिलाई म्युजिक भिडियोमा भने पटक्कै रुचि छैन तर राम्रो चलचित्रको प्रस्ताव आए नाइँ नभन्ने सोच छ । फुर्सदमा नाच्न रुचाउने नीति राम्रो साल्सा डान्स गर्छिन् । नृत्यका साथै उनलाई भ्रमण तथा सामाजिक कार्यमा समेत रुचि छ । भूकम्पपछि उनी साथीहरूसँग मिलेर सहायता नेपाल नामक संस्थामार्फत धेरै ठाउँमा सहयोगका लागि पुगेकी थिइन् ।
नीतिका बुवा अवकाश प्राप्त सैनिक हुन् भने आमा शिक्षिका । एक्ली छोरी नीतिलाई बाल्यकालदेखि नै आमाबुवाबाट कुनै पनि कुरामा रोकटोक भएन । उनका हरेक इच्छा तथा निर्णयमा अभिभावकको साथ रह्यो । सकारात्मक सोच राख्ने हरेक व्यक्ति नीतिका आदर्श हुन् । नीति माल्भिका सुब्बा तथा मिस वल्र्ड–२०१३ मिरगन योडबाट प्रभावित छिन् ।
पहिरनः फेसन ट्रेन्डमा जे छ त्यो फलो त गर्छु तर आफूलाई सजिलो लाग्ने पहिरन नै बढी लगाउँछु । कुर्ती मन पर्छ । कतै जाँदा ठाउँ, समय हेरेर पहिरन छान्छु । फिटनेसका लागिः पहिले जुम्बा जान्थें तर अहिले घरमै व्यायाम तथा डान्स गर्छु । म स्वस्थकर खाना एवं फलफूलमा जोड दिन्छु ।
मेकअपः हल्का मेकअप गर्छु । आइलाइनर, क्रिम र लिपग्लस लगाउँछु ।
सपिङः सपिङ त निकै मन पर्छ । हरेक दिनजस्तो केही न केही किनिरहेकै हुन्छु । त्यसमा पनि लुगा नै बढी किन्छु । पुस्तकमा पनि मेरो पैसा खर्च भैरहेको हुन्छ ।
जापानमा आयोजित ‘मिस इन्टरनेशनल’मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पुगेकी मिस नेपाल इन्टरनेशलन शाह चर्को विवादमा तानिएकी थिइन् । उक्त समयमा नीतिले ‘मिस इन्टरनेशनल’को एउटा कार्यक्रममा देश र देशका महिलाको शिक्षाको अवस्थाबारेमा राखेको धारणाको विषयलाई उनकोे समाजिक सञ्जालमा चर्काे आलोचना भएको थियो ।
‘म नेपालबाट आएकी हुँ, जुन एकदमै विकासशील देश हो । हामी शिक्षाको आधारभुत अधिकारमा एकदमै पछाडि छौं’ नीतिले कार्यक्रममा बिचार राख्दै गइन् ‘एकदमै दुःख लाग्दो कुरा के छ भने, हाम्रो देशमा दुई वर्गका महिला छन् । पहिलो वर्गमा शिक्षित महिला पर्छन्, जो शहरी क्षेत्रमा बस्छन् । अर्को वर्गमा ग्रामीण महिलाहरु छन्, जसलाई स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा उनीहरूका आफ्नै क्षमता अनि उपलब्धिका सम्भावनाबारे केही थाहा छैन ।’
नीतिले आफू शहरी महिला भित्र पर्ने बताउँदै देशका ग्रामिण क्षेत्रका धेरै महिलाहरु वेश्याबृत्तिका लागि विभिन्न देशमा बेचिने गरेको समेत सोही क्रममा बताएकी थिइन् । उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘ग्रामीण महिलाहरुलाई आफू कहाँ के गर्न जाँदै छु भन्ने थाहा नै हुँदैन । मेरो देशका प्रायः महिलाहरुसँग दुई वटा विकल्प छन् । कि त व्यावसायिक प्रगति छान्नुपर्छ कि व्यक्तिगत र पारिवारिक चाहना ।’
नीतिले कार्यक्रममा ब्यक्त गरेका यी विचारले सामाजिक सञ्जालमा उनको बिरुद्ध चर्का आवाजहरु उठिरहेका थिए । हुँदाहुँदा उनको अंग्रेजीको पनि मजाक उडाइएको छ । उनलाई अनुहारको मात्र राम्रो युवती भनेर गाली गर्ने थुप्रै देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनलाई ब्यङ्ग्य गर्दै ट्रोल समेत बनेका थिए ।
यता नीतिले भने सोवा विश्वविद्यालयमा भएको छलफलका क्रममा आफूले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको आलोचनाबारे फेसबुकमार्फत स्पष्टिकरण दिएकी थिइन् । उनले प्रष्टिकरण दिँदै आफूले भनेको कुरालाई गलत ढंगले बुझिएको उनले बताएकी हुन् । उनले नेपालको लैंगिक अवस्थाबारे मात्र कुरा राखेको बताउँदै सो कुरा सत्य भएको पनि बताइन् । उनले यसबाट कसैलाई चोट परेकोमा माफी पनि मागेकी छिन् ।
बोल्न पायो भनेर प्याच्च नबोल्नु र बस्न पायो भनेर थ्याच्च नबस्नु भन्ने उखान हाम्रो समाजमा निकै चल्तीमा छ । बोल्दा विचार नपुर्याए भोग्नु पर्ने परिणाम बारे सबै जानकार छन् । विशेष गरी लोकप्रिय व्यक्तिहरुले ध्यान नपुर्याई अभिव्यक्ति दिँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बेईज्जत हुने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपयुक्त अभिव्यक्ति दिन नसक्दा नेपाल र नेपालीको अस्तित्वमा आँच आउने गरेको छ । पछिल्लो समय यस्तै भयो नीति शाहको हकमा पनि । मिस नेपाल २०१७ को प्रतियोगिताको सेकेण्ड रनरअप नीति शाहले आफ्नो बोलीमा बिचार पुर्याउन नजान्दा विवादमा तानिएकी थिइन् ।
नीति शाहनेपाली र्याम्पमा स्थापित नाम हो । कहिले यो क्षेत्रमा पाइला हाल्छु भन्ने नलागे पनि पछिल्लो केहि वर्षदेखि उनको पाइला र्याम्पमा राम्रैसँग चलिरहेको छ ।
तपाईंको सुन्दरताको चर्चा किन धेरै भएको होला ?
सबैलाई माया लागेर होलाजस्तो लाग्छ ।
सुन्दरताको चर्चा सुन्दा कस्तो लाग्छ ?
खुशी लाग्छ । आफ्नो पेशामा अझै अगाडि बढ्ने हौसला मिलेको जस्तो लाग्छ ।
उमेर धेरै भएको छैन । तर, नाम धेरै कमाएँ जस्तो लाग्दैन ?
लाग्दैन । नेपाली समाजमा त्यस्तो लागेको मात्र हो । विदेशतिर त यो उमेरमा अझ धेरै नाम र दाम कमाइसकेका हुन्छन् ।
तपाईंले पनि नामसँगै दाम पनि कमाउनु भएको होला नि ?
छैन छैन । दाम कमाइएको छैन । अहिले हामी नाममा मात्र सीमित छौं, दाम पछि छ, यो क्षेत्रमा ।
करिअर कसरी सुरु भयो ?
केहि वर्ष अगाडि एक म्यागाजिनको लागि कभर फोटोको सुट गर्ने प्रस्ताव आयो । मैले स्वीकार गरे । विस्तारै अरुबाट पनि प्रस्ताव आयो ।
थुप्रै म्यागाजिनमा कभर फोटो छापिएका छन् । तैपनि दाम राम्रो कमाउनु भएको छैन भनेर कसरी पत्याउने ?
नेपालमा कभर गर्लका लागि पैसा दिने चलन रहेनछ । यो काम सित्तैमा हुँदैं आएको छ । दुःख लाग्छ । विदेशतिर यो काममा लागि राम्रै पैसा दिने गरेको पाइन्छ । तर, हाम्रोमा फोटो आयो भनेर खुशी हुनुपर्ने अवस्था मात्र छ ।
यो पेशामा आउन परिवारको कत्ति सहयोग छ ?
परिवारको सहयोग र सहमतिमा नै म यो क्षेत्रमा छु । ममी र बाबाले मेरो काममा प्रोत्साहन गरिरहनुभएको छ ।
हाम्रो समाजमा र्याम्प मोडलको खासै प्रशंशा गर्ने गरेको सुनिदैंन नि ?
दाम नै नभए पनि किन यो क्षेत्रमा युवाको आकर्षण नि ?
अहिले जसलाई पनि यो क्षेत्रले लोभ्याएको छ । गरौं न, हेरौं न भन्ने उत्सुकताले होला ।
यो क्षेत्रमा कोसँग प्रभावित हुनुहुन्छ ?
र्याम्प मोडल आश्मी श्रेष्ठबाट खुबै प्रभावित छु ।
म्युजिक भिडियो र चलचित्रमा खेल्ने रुची छ कि छैन ?
मलाई म्युजिक भिडियो भन्दा राम्रो अफर आयो भने चलचित्र गर्ने इच्छा छ । हेरौं के हुन्छ ।
प्रेम प्रस्ताव कतिको आउँछन् ?
धेरै नै आउँछ । तर, मलाई चाहिँ आजसम्म कोही मन परेको छैन ‘आइ लभ यु टू’ भन्नको लागि ।
नीति शाहको इन्स्टाग्रामबाट तस्बिर साभार
पछिल्लाे - साइप्रसमा एक नेपालीसहित सात महिलाको हत्या
अघिल्लाे - बेहुली बिनानै धुमधामकासाथ विवाह गरे यी युवकले : २ सय जन्ती, ८ सयलाई भोज !